China HDPE kwagcizelela emazombezombe ipayipi (B-uhlobo isakhiwo) ifektri abakhiqizi | UShengyang
HDPE emazombezombe isakhiwo kwaqinisa udonga uhlobo B ipayipi ubizwa nangokuthi i-HDPE emazombezombe isakhiwo odongeni ipayipi, carat tube, HDPE emazombezombe uhlobo B ipayipi, high kwabantu polyethylene emazombezombe ipayipi, uhlobo B isakhiwo odongeni ipayipi. Luhlobo olusha lwepayipi eliguquguqukayo elinesisindo esincane, amandla aphakeme, udonga lwangaphakathi olubushelelezi, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokuguga, ukugqoka ukumelana, ukumelana nengcindezi, ukumelana nomthelela onamandla, ukuguquguquka okuhle, impilo nokuphepha. Ikhwalithi ye-weld iphezulu, umzimba uxhunyiwe, ikhwalithi yokuxhuma yinhle, akukho ukuvuza, impilo yensizakalo yinde, futhi ukwakhiwa kuyashesha futhi kulula.
◎ Isimo esincibilikisayo esishisayo, ukugoqa okuhambisanayo ngaphakathi nangaphandle kodonga lwesakhiwo, ipayipi iyunifomu ephelele, akukho weld.
Use Ukusetshenziswa komoya opholile, okugcina ukushisa kwepayipi ngaphakathi kokubumba kusatshalaliswe ngokuphelele, ngeke kubangele ukucindezeleka kwangaphakathi, akukho kudilizwa nokuqhekeka.
Dem Ukuqothula amakhaza, ukupholisa ipayipi ekamelweni lokushisa, usebenzisa imodi yokuncipha kwesikhunta, ipayipi ngeke likhubazeke. Futhi i-HDPE ipayipi elingenalutho eligoqa ipayipi, ukusetshenziswa kwemishini yasekhaya nobuchwepheshe, i-high-density polyethylene material (HDPE) njengezinto zokusetshenziswa, ku-Water-selehlile, isilonda esincibilikayo esakha, isakhiwo sohlobo A ngokuya nge-GB yomhlaba wonke / T19472.2-2004 imithethonqubo Wall pipe. Ngokwenza lokhu, ishubhu lesikwele liqala likhishwe, bese limiswa futhi lilinywe libe yipayipi eliyindilinga ngemuva kokupholisa ngamanzi.
Pipe I-HDPE high-density polyethylene spiral reinforced pipe in the production of raw material performance performance are high very high, ngakho-ke ngaphezu kwe-2% ye-masterbatch. Ngaphandle kwalokho, enye i-HDPE njengokuqukethwe, ngakho-ke intengo iphansi kakhulu. Futhi i-HDPE engenalutho odongeni emazombezombe ithubhu yensimbi eyindilinga eqinile yakhiqiza izinto ezingasetshenziswa kakhulu, ngakho-ke izindleko ziphakeme. Kodwa-ke, ngenxa yokutshalwa kwemali okuncane kwimishini yokukhiqiza, izithiyo eziphansi, abakhiqizi abaningi, emncintiswaneni ongahlelekile emakethe, ukuze kuzuzwe izindleko ze-Advantage, inani elikhulu lezinto ezingaphili (i-calcium carbonate) nezinto ezenziwe kabusha, okuholela ekhaleni lentengo emakethe enkulu, futhi liphansi ngokuhlekisa.
Tube I-HDPE egoqa ithubhu elithuthukisiwe isebenzisa isokhethi yohlobo lwe-electrofusion uxhumano (isikhombimsebenzisi esiqinile), isikhombimsebenzisi sisebenzisa isokhethi ne-electrofusion izindlela ezimbili ngasikhathi sinye. I-HDPE evunguza ipayipi eqiniswa ukumelana no Ezindaweni lapho kudingeka khona ukugcwaliswa ngokushesha okusheshayo, amapayipi aqinisiwe we-HDPE angasetshenziswa ngezindlela ezahlukahlukene. Umhlabathi wezithende eziningi zangaphambi kokushisela, bese ufakwa emseleni. Futhi i-HDPE ipayipi elingenalutho eligoqa ipayipi lisebenzisa (kagesi) indlela yokuncibilika eshisayo yokuxhuma, ngenxa yokuguqulwa kwepayipi lembobo, (ugesi) ithephu elincibilikayo elishisayo alikwazi ukuxhunywa nepayipi elingenalutho lodonga. Ngemuva kokuthi ipayipi seliboshwe ngokuphelele, ukwakhiwa kufanele kushiselwe emseleni, odinga ukumbiwa okukhulu nesivinini sokwakha esihamba kancane. (Ugesi) ukuxhuma kwebhande elishisayo elincibilikayo, isakhiwo samandla ampofu, kuhlanganiswe nobude bepayipi eliboshwe ngomthungo, alikwazi ukuzivumelanisa nesisekelo esithambile noma izindawo zokuhlala ezingalingani ezibekiwe.
The Kokunye okufanayo kwe-HDPE ipayipi eliqinisiwe (i-B-type pipe) ne-HDPE ipayipi lodonga olungenalutho (i-A-type pipe), uma kuqhathaniswa nepayipi le-B elingcono kakhulu kune-A-pipe, ukusetshenziswa kwe-B-pipe nakho kungcono kune-A-pipe, enkombeni efanayo, izinhlobo ezimbili zezinto zamapayipi Ngokufana nentengo ejwayelekile kufanele ifane, intengo kufanele futhi ifane, ukusebenza kwezindleko zebhubhu yohlobo lwe-B kusobala ukuthi kungcono kune-A-type tube .
Pipe Ipayipi elithuthukisiwe le-HDPE, kumaphrojekthi abalulekile kuzwelonke nasezifundazweni nakomasipala, inani elikhulu lokusetshenziswa, ikakhulukazi ezindaweni ezingasogwini, indawo yokuhlala engalingani ikhona. Isifunda sisetshenziswa kakhulu. Futhi i-HDPE ipayipi lokufaka udonga olungenalutho ngenxa yenqubo nesakhiwo ayinangqondo kakhulu, impahla ayimsulwa ngokwanele, ukuphepha kobunjiniyela kuphansi kakhulu, futhi kwezinye izindawo ezibalulekile zepayipi elingenalutho lokufaka udonga, ipayipi elingenalutho lokufaka ipayipi liphansi kakhulu. Ubunjiniyela bukhawulelwe ukusetshenziswa, bekungasebenzi ezindaweni ezisogwini.
Akunzima ukuphetha ngokuthi ukusetshenziswa kwesokhethi yohlobo lwe-electrofusion uxhumano lwe-HDPE eqinisa ishubhu yiyona eguquguquka kakhulu, futhi isikhombimsebenzisi siqinile. isikhombimsebenzisi, siqinisekisa ukubonwa okuhlanganisiwe kanye nesakhiwo esigcizelelwe. Ngesikhathi sokwakhiwa kwephrojekthi, uma itafula lamanzi emseleni liphakeme, izindawo ezinkulu zemvula zinzima, noma ukuwa kunzima, kungenziwa phansi Ukushiselwa kwamapayipi amaningi emseleni, okungenzeki namanye amapayipi, kungasheshisa inqubo yokwakha, futhi kungenziwa ngale ndlela. Ngasikhathi sinye, igwema ukwakhiwa okuyingozi futhi inciphisa izindleko zokwakha.
Ipayipi Elinamanzi Elimanzi Elimanzi Elimanzi
Ipayipi Elimanzi Pipe Wall
I-Hdpe Double Wall Lukathayela Lokukhipha Pipe Machine
I-Hdpe Double Wall Lukathayela Lamanzi Amanzi
Indle Ukulahlwa Hdpe Double Wall lukathayela Pipe